March 2021 - Online Hartha
ဦးအောင်ဇေယျ နယ်သားတွေ သတ္တိမနည်းဘူးဆိုတာ ပြခဲ့တဲ့ အမိုက်စား တော်လှန်ရေးခံတပ်(ရုပ်သံ)
March 14, 2021 by Online Hartha
အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်ရလဲ ကြည့် … ခင်ဦးမြို့နယ် ရွာသာရွာမှာ မအလ သူပုန်တပ်တွေ ဝင်လာတော့ ရွာသားတွေ လက်နက်ကိုယ်စီကိုင်ပြီး ထွက်ရင်ဆိုင်တာ မအလ တပ် သေနတ်နဲ့တောင် မချိန်ရဲဘူး … အကြမ်းဖက်ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်မှသာရမယ် Video: credit ဦးအောင်ဇေယျနယ် ရှိးရာလက်နက်စွဲကိုင်၍ တော်လှန်ရေး ရွာမှာလည်း ၂ခါပြန် ပြေးကြရပြီ စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့နယ် ရွာသာကျေးရွာမှာ… (13.3.2021)နေ့တွင် ဒလန်မိသားစုက လာရောက်ခေါ်ဆိုခိုင်းသည်ဟု ဆိုကာရဲကား ၃ စီး အင်အား ၃၀ ကျော်ဖြင့် ရောက်လာခဲ့ရာ ရွာသူရွာသားများက ရွာထဲအဝင်မခံပဲ ရွာထိပ်ကပင် ရွာလုံးကျွတ်…. ဒုတ်၊ ဓား၊ လှံ၊ ခရင်း၊ လေးခွ များကိုင်ဆောင်ပြီး တားဆီးပိတ်ပင် မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည် ဒုတိယအကြိမ်…ကားဆယ်စီးဖြင့်…..စစ်ကား … Read more
အပူဓါတ်နဲ့အလှုပ်ဓါတ် ခိုက်နေတဲ့ကာလပါ မိမိနေအိမ်မှာ ဓါတ်အခိုက်နှင့်ဓါတ်ဖြည်နည်း
#ဓါတ်အခိုက်နှင့်ဓါတ်ဖြည်နည်း အခုကာလတွေဟာ အပူဓါတ်နဲ့အလှုပ်ဓါတ် ခိုက်နေတဲ့ကာလပါ ဓါတ်ကဓါတ်အလုပ်ဓါတ်လုပ်နေမှာပါ အပူဓါတ်က မီးဘေး သွေးထွက်သံယိုဘေးဖြစ်စေပါတယ် အလှုပ်ဓါတ်က ငလျှင်လှုပ်စေပါတယ် အဲဒီတော့ ဒီဓါတ်တွေငြိမ်းအောင် ငြိမ်အောင် အအေးဓါတ်နဲ့ အငြိမ်ဓါတ်တွေလှူရပါတယ် လုပ်ရပါတယ် အအေးဓါတ် =နေအိမ်ဘုရားမှာ ရွှေရင်အေး ရေခဲရေမကြာခဏလှူပေးပါ ဘုရားဆင်းထုတော်အားရေမကြာခဏသပ္ပါယ်ပေးပါ အဲဒါအပြင် အိမ်အေးအောင် အိမ်ကြမ်းပြင် သံမန်တလင်း အိမ်ရှေ့ လမ်းမ နေရာတွေကိုရေမကြာခဏပက်ဖြန်းပေးပါ အအေးဓါတ် ခိုအောင်လုပ်ပေးပါ အငြိမ်ဓါတ်= ဘုရားစေတီတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာကျောက်ပြားလှူပေးပါ တရားထိုင်ခုံလှူပေးပါ သပိတ်ကြိုး သပိတ်ခြေလှူပေးပါ…။ #ကျော်ဘိုဘိုဟိန်း Unicode Version #ဓါတျအခိုကျနှငျ့ဓါတျဖွညျနညျး အခုကာလတှဟော အပူဓါတျနဲ့အလှုပျဓါတျ ခိုကျနတေဲ့ကာလပါ ဓါတျကဓါတျအလုပျဓါတျလုပျနမှောပါ အပူဓါတျက မီးဘေး သှေးထှကျသံယိုဘေးဖွဈစပေါတယျ အလှုပျဓါတျက ငလြှငျလှုပျစပေါတယျ အဲဒီတော့ ဒီဓါတျတှငွေိမျးအောငျ ငွိမျအောငျ အအေးဓါတျနဲ့ အငွိမျဓါတျတှလှေူရပါတယျ လုပျရပါတယျ … Read more
ဝကျခွံလုံးဝသကျသာပွီး နောကျလညျး ထပျမထှကျစခေငျြရငျ ဒီနညျးလေးတှကေို လုပျကွညျ့ပါ
ဝက်ခြံလုံးဝသက်သာပြီး နောက်လည်း ထပ်မထွက်စေချင်ရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ ပျိုမေတို့ မျက်နှာလေးလှလှလေးမှာ ဝက်ခြံတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် အပြင်ထွက်လို့ အလှပြင်ရင်လည်းအဆင်မပြေ၊ မှန်ကြည့်တိုင်းလည်း စိတ်မချမ်းသာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှုမရှိတွေ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ် ။ ဝက်ခြံတွေမြင်မကောင်းအောင် အများကြီးထွက်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပေါ်မှာ ဟိုနားနည်းနည်း၊ ဒီနားနည်းနည်းနဲ့ အမြဲမပြတ်ထွက်နေတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့ မျက်နှာပေါ်မှာ အမြဲမပြတ်နေရာယူထားတဲ့ ဝက်ခြံတွေကို လုံးဝသက်သာစေပြီး မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ဝက်ခြံလေးတစ်လုံး၊နှစ်လုံး ထွက်လာရင် လက်နဲ့သွားသွား ညှစ်ချင်ပါတယ်။ လုံးဝမညှစ်ပါနဲ့၊ လက်နဲ့ မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းက ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေပြီး အမာရွတ်ထင်းထင်းကြီးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်နဲ့ လုံးဝမထိ၊ မညှစ်မိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး နေပါ …။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန် မျက်နှာသစ်ပြီးပြီးချင်း၊ ဝက်ခြံထွက်နေတဲ့နေရာကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက် … Read more
လကျကောကျဝတျ လမျးကွောငျးလေးတှကေနေ ပွောပွပေးမဲ့ သငျ့ရဲ့ကံကွမ်မာ
လက်ကောက်ဝတ် လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေ ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေလိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာ ပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး- ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော် တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက် မှာ လက်ကောက်ဝတ် မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့. လမ်းကြောင်း ၁ အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းက တကယ်လို့ မှိန်းဖျော့နေမယ်၊ အပြတ်တွေများနေမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းပြီးတော့ … Read more
အရိုးကြိုးအတှကျ မယုံရငျလာခဲ့ပါ ရိုကျခြိုးပွီး (၃)ရကျနဲ့လုံးဝ ပွနျဆကျပွမယျ
”အရိုးကျိုးအတွက်မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီး၃ ရက်နဲ့လုံးဝ ပြန်ဆက်ြပမယ်တဲ့” (ရင်းနောင်းပင်)” ကျွန်တော့်အား တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတစ်ချို့ အမြင်ကပ်ကြတယ်ဗျ။ ဟဲဟဲ ….ကပ်တာကသူတိူ့အလုပ် ဆေးကုရမှာက ကျွန်တော့်အလုပ် ဘာဖြစ်ဖြစ်က်ုယ့် အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပါပဲ” အရိုးကျိုးတဲ့လူ ၃ ရက်နဲ့ လုံးဝ ပြန်ဆက်စေရမယ်။ မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီးပြန်ဆက်ပြမယ်။ လမ်းဘေးဆေးပင်နဲ့ပဲဆက်ပေးမယ်။ အဲ့ဒါ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးးးပဲ။လျှို့ဝှက်ထားတဲ့နည်းကို ကူတို့ဆိပ်မှာ မှိုအိတ်ဖွင့်သလို လုပ်လိုက်တော့ တန်ဘိုးမဲ့တာပေါ့။ တန်ဘ်ိုးထားသူတွေအတွက်ပါ။ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပါ အသပြာဆရာတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။ ပုံထဲကဆေးပင်ကို ထောင်းပြီး စည်းထားလိုက်ပါ …မကိုက်ဘူး…. မနာဘူး …တစ်ညတည်းဆက်တယ်(လက်တွေ့) ၃ရက်ဆိုတာက ပိူကောင်းအောင်ဆက်စည်းခိုင်းတာပါ။ကျန်းမာကြပါစေ။ ၃ရက်ကြာလျှင် ပြန်ဆက်ပါမည်။ #Credit orginal writer ကျွန်းရွက်နှင့် အတော်တူတာ။ ဖက်ခါးပင်နှင့် အသီးပါ တူတယ်။အရိုးကျိုးရင် ဆေးရုံသွားစရာတောင် မလိုဘူးတဲ့။ တစ်ခါသား ကျွဲကြီးတစ်ကောင် တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကြပြီး အရိုးတွေ … Read more
ရာသီလာတဲ့အမြိုးသမီးတှကေို သီးသနျ့တဲအိမျစုတျအတှငျးမှာသာ အိပျတဲ့ (ရုပျသံ)
ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်အပြင်ဖက် သီးသန့်တဲအိမ်စုတ်အတွင်းမှာသာ အိပ်စက်ခွင့်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ(ရုပ်သံ) နီပေါနိုင်ငံဟာ မိန်းကလေးအများစု ရာသီလာချိန်တွေမှာဆိုရင် သီးသန့်တဲအိမ်လေးထဲမှာ နေထိုင်ရတဲ့ဓလေ့တစ်ခုရှိကြောင်း Parwati Bogati အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြထားပါတယ်။ Parwati Bogati အမျိုးသမီးဟာလည်း မိန်းကလေးတိုင်း တစ်လတစ်ခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် တဲအိမ်လေးထဲမှာ ခုထိနေနေရတာပါ။အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာစဉ်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ သီးသန့်တဲအိမ်လေးကို သူတို့တွေက “Chhaupadi”လို့ ခေါ်ကြပါတယ်…။ ဆောင်းရာသီရောက်လို့ အေးစက်နေတဲ့ ညအချိန်တွေဆိုရင် မွန်းကျပ်နေတဲ့ တဲအိမ်လေးထဲမှာ မီးမွေးပြီး သူတို့ကိုသူတို့နွေးထွေးအောင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကို လူတွေ ၊တိရိစ္ဆာန်တွေ ၊အပင်တွေ ၊အသီးအရွက်တွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကို လုံးဝပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ ဓလေ့တွေကလည်း ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်။ JRose (KB Chimmy) Unicode Version ရာသီလာတဲ့အမြိုးသမီးတှကေို အိမျအပွငျဖကျ သီးသနျ့တဲအိမျစုတျအတှငျးမှာသာ … Read more
မွနျမာ့လှတျလပျရေးဇာတာ နှငျ့ ဖကျဒရယျနိုငျငံသဈ ပျေါထှနျးမယျ့အကွောငျး
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဇာတာ မြန်မာ့တပ်မတော်ပျက်သုဉ်းပြီးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသစ် ပေါ်ထွန်းမယ့်အကြောင်း…. မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ယူတဲ့ ရက်စွဲဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ ဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်က မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ပေးတော့မယ် ဆိုတော့ ရက်ကောင်းရက်မြတ် ရွေးကြတယ်။ နာမည်ကျော် ဗေဒင်ဆရာကြီးတွေက အချိန်အခါကောင်း ၅ ခု ပေးကြတယ်။ ရွေးရခက်နေတော့ဦးနုက ပဲခူးမြို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးသက်တင်ဆီ ဗိုလ်လက်ျာကို လွှတ်ပြီး မေးခိုင်းတယ် သူက နက္ခတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်တယ်။ ဗိုလ်လက်ျာက အနာဂတ် မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ် ဆိုပြီး။ စစ်တပ်အင်အားကြီးမားစေမယ့် လွတ်လပ်ရေး ဇာတာ တွက်ခိုင်းတယ်။ ဆရာကြီး ဦးသက်တင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ … Read more
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတမရှိတော့ ငှက်ပျောသီးကြောင့် ကလေးတစ်ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးရပြန်ပြီ
ဌက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် စီ ၊ B2တို့ပါဝင်ပြီး လူသားကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အသီးပါ။ ကလေးတွေစားရင်လည်း သူတို့လေးတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကျွေးတဲ့အခါ ဘယ်အရွယ်မှ ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။အဖြစ်ပျက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ခုမှမွေးတဲ့ကလေးလေးကို အဘွားဖြစ်သူက ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမရှိတော့ ဌက်ပျောသီးကျွေးမိခဲ့တယ်။ ကလေးကို ကျန်းမာရေးကောင်းစေချင်လို့ ကျွေးကာမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေကြုံရတော့တယ်။ ကလေးလေးဟာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်တွေကျလာတယ်ဆိုပြီး အဘွားဖြစ်သူက စိတ်ပူကာ ဌက်ပျောသီးကို ထောင်ချေပြီးကျွေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးရဲ့အစာခြေဖျက်စနစ်ဟာ သိပ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် သွေးတွေ အန်ပါလာတော့တယ်။ ချက်ချင်း ဆေးရုံပို့တော့ ကလေးမှာ ကျင်ကြီးအိမ် သွေးထွက်နေတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ကလေးရဲ့နှာခေါင်း ၊ ပါးစပ်နဲ့ စအိုဝကနေ သွေးတွေထွက်လာပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေလည်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ … Read more
မြောက်ဥက္ကလာရဲ့ GENERATION Z ဝိညာဉ်တို့ နိုးထလာလေပြီ
မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းတွင် မကျွတ်မလွတ်သောဝိညဉ်များကြောင့် ညတိုင်းချောက်လှန့်ခြင်းခံနေရတဲ့ရဲတစ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပီးအသက်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းနားမှာလူသေမှုတွေမြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်၃နာရီလောက်ဆိုဆိုရင် လူစုလူဝေးနဲ့အသံကြားလို့ တပ်ဖွဲ့တွေသွားကြည့်တာပါ ဘာမှတော့မတွေ့ခဲ့ပါဖူး… အော်ဟစ်သံများလိုကြားရပီး သွားကြည့်ရင်ဘယ်သူမှမရှိဘဲဖြစ်နေခြင်း စစ်ကားတန်းလာနေတဲ့အချိန်ကားမီးအရှေ့အရိပ်လိုလိုများဖြတ်ဖြတ်သွားကြောင်း၊ ကယ်ကြပါ၊ယူကြပါအသံများညစဉ်ညတိုင်းကြားနေရကြောင်းတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကဝင်ခံလာပါတယ်။ အသံတွေကလည်းနီးနီးလေးကဘဲအော်နေသလိုလို အရိပ်တွေကတော့အနားကဘဲဖြတ်သွားတာသွားကြည့်ရင်မရှိတော့ဖူး၊ပီးတော့မှောင်ထဲကြည့်လိုက်ရင် ရေအိုင်နေသလိုမျိုးအကွက်တွေတွေ့နေတာအမှတ်တမဲ့ဆိုသွေးကွက်နေဖြစ်နေသလိုမျိုး၊မီးထိုးကြည့်ရင်ဘာမှမရှိဖူး၊တစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောထဲက သားရဲကောင်တွေသာမကြောက်တာဗျာ၊မမြင်ရတော့အားလုံးကြောက်နေကြတယ်။တစ်နေ့က တပ်ကတပ်သားတစ်ယောက်တစ်ညတုန်းကဝင်ပူးခံရတယ်ပီးတော့ ကယောင်ကတန်းတွေပြောနေတာ၊အစကဖျားနေတာဘဲထင်ကြတာ နောက်တော့မှဗိုလ်ကြီးက ရိပ်မိသွားပီး ဖတ်ရွတ်၊ပရိတ်ရေတိုက်တာတို့ဖျန်းတာတို့လုပ်လိုက်မှ ထွက်သွားတာ၊ နောက်ဆုံးမှာ အမျှမဝေနဲ့ဆိုတာပီပီသသကြီးပြောသွားသေးတယ်။အာ့လိုမျိုးတွေကတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကြုံရတာမဟုတ်ဖူးလေ၊ ည ဂျူတီကျတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကြုံနေရတာဆိုတော့လည်းပြောရခက်တယ်ပေါ့၊တချို့တပ်သားပေါက်စလေးတွေဆိုလန့်ပီးကြောက်ဖျားဖျားနေကြတယ်၊ ညနက်ပိုင်းတွေဆိုပြဿနာဖြစ်တာတွေများလာတယ်၊ရဲဘော်၂ယောက်ရန်ဖြစ်ပီးအချင်းချင်းပစ်မယ်ခတ်မယ်တွေဖြစ်လို့ဗိုလ်ကြီး ဒဏ်ပေးထားရတယ်။ အထက်ကိုတော့မင်းမိန့်နဲ့နှင်ခိုင်းဖို့တော့တင်ပြထားပါတယ်လို့ပြောပြလာပါတယ်၊မကောင်းမှု့ကနောင်ဘဝမကူးပါဘူး အခုပဲလက်တွေခံစားနေရပီ ကျဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေကသေဆုံးတာတောင်အနားမယူကြသေးဘဲဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့အရမ်းဝမ်းနည်းခံစားရပါတယ်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ။ Crd-Original Post Unicode Version မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျးတှငျ မကြှတျမလှတျသောဝိညဉျမြားကွောငျ့ ညတိုငျးခြောကျလှနျ့ခွငျးခံနရေတဲ့ရဲတဈဖှဲ့ဝငျမြား အကွမျးဖကျဖွိုခှငျးခံရပီးအသကျပေါငျးမြားစှာပေးဆပျလိုကျရတဲ့ မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျးနားမှာလူသမှေုတှမွေောကျမြားစှာဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ ညဘကျ၃နာရီလောကျဆိုဆိုရငျ လူစုလူဝေးနဲ့အသံကွားလို့ တပျဖှဲ့တှသှေားကွညျ့တာပါ ဘာမှတော့မတှခေဲ့ပါဖူး… အျောဟဈသံမြားလိုကွားရပီး သှားကွညျ့ရငျဘယျသူမှမရှိဘဲဖွဈနခွေငျး စဈကားတနျးလာနတေဲ့အခြိနျကားမီးအရှအေ့ရိပျလိုလိုမြားဖွတျဖွတျသှားကွောငျး၊ ကယျကွပါ၊ယူကွပါအသံမြားညစဉျညတိုငျးကွားနရေကွောငျးတာဝနျကရြဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈယောကျကဝငျခံလာပါတယျ။ အသံတှကေလညျးနီးနီးလေးကဘဲအျောနသေလိုလို … Read more
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှ ထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ ပို့လိုက်သောအခါ
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်… အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကိုအိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေအလောင်းချမယ်လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေကအပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူးနော် အိမ်ရှေ့မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါနော်တဲ့ ” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့. အော်…ဟုတ်ကဲ့ အမအဖေလား ဒါဆိုအိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူး အပြင်မှာပဲ အလောင်းပြင်မယ်ပေါ့ ဟုတ်လားအမ… … Read more